Maine Coon | Amakati kaNoti
Uma ufuna ikati lasekhaya elithandekayo nelithandekayo elikhudlwana kuneLungu elijwayelekile futhi elibukeka njengengonyama encane, awuceli okungenakwenzeka 🙂. Kukhona uhlobo oluhlangabezana nakho konke okucelayo, futhi lelo yikati Maine Coon.
Ngesisindo esifinyelela ku-11kg (owesilisa), lobu boya obuyigugu bunokubukeka okuzokwenza wonke umndeni uthandane, kungaba yizingane, asebekhulile noma abadala.
1 Umsuka nomlando weMaine Coon
2.1 Imibala yobuhlanga
2.1.1 I-black maine coon
2.1.2 I-maine coon emhlophe
2.1.3 IMaine Coon mpunga
3 Uyini umlingiswa wayo?
4 Kudinga ukunakekelwa kuni?
4.5 Udokotela wezilwane
5 Kubiza malini iMaine Coon?
Umsuka nomlando weMaine Coon
IMaine Coon, isiqhwaga samakati, Kuyinto yokuzalwa e-United States, ikakhulukazi kusuka eMaine. Kepha iqiniso ukuthi akazi kahle ukuthi yini indaba yakhe, ngoba kunemibono eminingi ngayo, eminye inengqondo kuneminye:
Kunenganekwane ebuyela emuva ku-1793, elandisa indaba kaCaptain Samuel Clough, ongowokuzalwa eWiscasset (Maine), owayethutha umthwalo weNdlovukazi uMarie Antoinette eSally, lapho kwatholakala khona ikati.
Kunendaba lapho kuthiwa amaViking ayengawokuqala ukufika eMelika, nokuthi ayehamba namakati ayegcina amagundane ngasese.
Umbono onengqondo kunazo zonke uthi empeleni yisiphambano phakathi kwamakati anezinwele ezinde (njenge-angora) namakati asendle aseMelika.
Noma kunjalo, ngo-1953 iCentral Maine Coon Cat Club yakhiwa eMaine, eyayizonikeza ukuthandwa kwelinye lamakati afuywayo akhangayo emhlabeni.
Ngokuya nge-International Feline Federation, umlingisi wethu omkhulu kumele abe:
Isisindo: phakathi kuka-6,8 no-11kg owesilisa naphakathi kuka-4,5 no-6,8kg kowesifazane.
Umzimba: inde futhi inemisipha embozwe izinwele ezimfishane ekhanda kepha yinde uma isondela ngomsila.
Ikhanda: okuphakathi, okunama-cheekbones avelele.
Izindlebe: yinde futhi ikhombe.
Amehlo- Enkulu futhi imile okweqanda, noma imuphi umbala ngaphandle kokuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphandle uma kuyiMaine Coon emhlophe.
Yize yonke imibala yamukelwa (ngaphandle kwe-colorpoint, ushokoledi, isinamoni, i-lilac ne-fawn) eminyakeni yamuva kunesidingo esikhulu sabambalwa ikakhulukazi. Futhi akuyona into engaphansi: umbala woboya bayo muhle kakhulu, muhle kakhulu. Ingabe lokhu:
I-black maine coon
Isithombe - InspirationSeek.com
Uma ufuna ukuba ne-panther emnyama emnyama enezinwele ezinde, lokhu ngokungangabazeki kungaba ngumngane wakho omusha onoboya omkhulu.
I-maine coon emhlophe
Uma, ngokuphambene nalokho, ufuna ukuthi ibe noboya obumhlophe njengeqhwa, noboya bakho ry.
IMaine Coon mpunga
Okumpunga ngumbala omuhle kakhulu, onikeza i-feline ukubukeka okumangazayo, okuyindida.
I-brindle iphethini endala kakhulu. Kungaba yi-grey noma i-orange brindle.
Uyini umlingiswa wayo?
Lolu hlobo lekati yaziwa ukuthi iyathandeka futhi inothando kakhulu. Uyakujabulela ukuba nomndeni wakhe wabantu, noma ngabe ubukele i-TV noma udlala kancane. Ngalo mqondo, imvamisa iyikati elizolile kakhulu, yize lingaba nayo, njenganoma yimuphi omunye u-feline, "izikhathi zalo zokusangana" lapho liqala ukugijima lizungeze indlu noma lidlale ngamanzi.
Futhi, kuyathandeka kakhulu, kangangokuba kulula ukuthi imenze azwane nezinye izilwane, njengezinja. Kepha ukuze ajabule, uzodinga ukufundiswa ukuqhubeka neleash futhi amahanisi, ngoba uyathanda ukuphuma ayoshaywa umoya (yebo, njalo ezindaweni ezinokuthula). Vuliwe Lesi sihloko Sichaza ukuthi singayithola kanjani.
Kudinga ukunakekelwa kuni?
IMaine Coon kumele ithole uchungechunge lokunakekelwa nsuku zonke ukuze impilo yayo nenjabulo kuqinisekiswe. Zimi kanje:
Okunconyelwe kakhulu ukuthi nika okuphakelayo kwekhwalithi ephezulu noma ukhethe ukudla okungokwemvelo okufana neYum, Summum noma iBarf Diet. Uma ukhetha okokugcina, sikukwazisa ukuthi ucele usizo kudokotela wezokudla onolwazi ngokukhethekile ngokudla okunesibindi, ngoba ukukwenza kabi kuzobeka impilo yesilwane engcupheni.
Izinwele zabo zibhulashiwa kabili ngosuku ngesikhathi sokuchitha, kanye kanye ngosuku unyaka wonke. Ibhulashi eliqinile lingasetshenziselwa lokhu, kanye ne- I-FURminator, okuzosusa zonke izinwele ezifile.
Kanye ngesonto izindlebe kufanele zihlanzwe nge-gauze ehlanzekile (eyodwa yendlebe ngayinye) ethanjisiwe emanzini afudumele, ngaphandle kokujula.
Izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto amehlo kufanele ahlanzwe nge-gauze ehlanzekile (eyodwa ngeso ngalinye), emanziswe ukumnika kwe-chamomile. Ngale ndlela, ngaphezu kokuzihlanza, ingozi yokutheleleka izoncipha.
Noma uzochitha amahora aphakathi kuka-16 no-18 ulele, lapho uphapheme uzofuna ukudlala, ukunyakaza, ukugijima. Akukhona nje kuphela ukuthi udinga ukuzigcina ulungile, kodwa futhi kubaluleke kakhulu ukuthi ukwenze ukunciphisa ubungozi bokucindezeleka.
Ngalesi sizathu, nsuku zonke kufanele uchithe isikhathi nsuku zonke futhi udlale ngaso, usebenzisa noma iyiphi ikati ithoyizi lokho kungatholakala ukuthengiswa ezitolo zezilwane, njengezilwane ezigxotshiwe, amabhola noma izinduku.
Kungabonakala kunengqondo, kepha ngicabange ukuthi kulula ukukufaka ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kutholakale isilwane, kulokhu kube yikati, bese kunganakwa. Kubaluleke kakhulu lokho Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuletha ikhaya elinoboya, khuluma nomndeni ukuze kungaveli izinkinga zakamuva, uma kungenjalo ukuhlala ndawonye ngeke kujabulise noma ngubani, okungenani ikati.
Esinye isihloko engingathanda ukukhuluma ngaso ukuvakasha. Uma sishiya ikati livalelwe egumbini lapho othile eza ukusibona, into esizoyizuza ukuthi iyabaphazamisa abantu. Ngakho-ke, udinga ukuba nathi isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukuze uhlale uzizwa ukhuthazekile futhi ujabulile.
IMaine Coon imvamisa iyinhlobo enempilo enhle. Kodwa-ke, kungakuhle ukuthi umyise kudokotela wezilwane ukuze abe ne- imigomo edingekayo, neutering noma ukumchitha lapho unezinyanga ezineminyaka emi-5 kuya kwengu-6, bese uyithatha ihlolwe njalo njengoba kunguhlobo olungaba nalo i-hip dysplasia.
Kubiza malini iMaine Coon?
Ungathanda ukuhlala neMaine Coon? Lesi 'sikhondlakhondla' esikhangayo ngokungangabazeki yisilwane esizokwenza ukuthi uchithe izikhathi ezihlekisa kakhulu, futhi ezinye zibe nethenda. Kepha kufanele ugcine engqondweni ukuthi intengo imayelana I-900 euro uma uhlela ukukuthola endaweni yokuzingela.
Uma ufuna ukubona izithombe eziningi zeMaine Coon, nakhu ke:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Maine Coon
Ukuziphatha komfanyana osemusha
Ikati lami ngeke liphulwe, ngani?